FAQs - Long-dalana, pejy Electronic Company Limited
Tontolo iainana ve ny vokatra?
Eny, ny vokatra dia cores tontolo iainana ary SGS taratasy fanamarinana, ny zavatra tany am-boalohany isika fampiasana fitaovana toy ny epoxy coating sy ny tranga manana taratasy fanamarinana Rohs sy Ul koa.
About manokana haben'ny cores, raha afaka manome.
Eny, raha ny habeny dia miavaka isika, dia afaka manao ho anao too.we afaka handinika raharaha misokatra mold.we manana raharaha ORINASA MPANAMBOATRA, dia afaka manokatra bobongolo ao anatin'ny 2 week.So tsy olana.
Momba ny tetikasa vaovao sy ny fanatontosana dia avo dia avo, no izay atolotrareo?
Momba ny tetikasa vaovao isika, dia manohana customer.we afaka manao fitiliana sy mamokatra ho an'ny approval.we santionany dia faly mandray tetikasa vaovao sy ny request.It vaovao no manampy antsika koa.
Raha tsara ny vokatra dia tsy ny fangatahanay, ny fomba hanaovana?
Voalohany, dia tsy izany, dia ho santionany thing.we alohan'ny batch production.After ny mpanjifa approval.we hanomboka production.So ny toetra hihaona customer.As vokatry ny vokatra fampisehoana mismatch isika, dia hitondra ny mpanjifa rehetra ny fatiantoka.
Momba ny fonosana, dia ho azo antoka fa azo antoka ny rivotra na ny ranomasina shipping.Our varotra ara-barotra manana mihoatra ny 5 taona traikefa in export.So tsy manahy ny package.On mahazatra isika dia hampiasa pallet ho an'ny fiarovana ny entana.
Fe miorina Amorphous fehy , Dry Type mpanova , Iron- miorina Amorphous fehy , Nanocrystalline Cores Fa Current mpanova , Nanocrystalline Core , Emc Core,